अब हावाबाट तरकारी पनि फलाइँदै ! मोदी गाउँमा यस्तो प्रविधि - Deshko News Deshko News अब हावाबाट तरकारी पनि फलाइँदै ! मोदी गाउँमा यस्तो प्रविधि - Deshko News
अब हावाबाट तरकारी पनि फलाइँदै ! मोदी गाउँमा यस्तो प्रविधि
पर्वत, भदौ १७
जिल्लामा पहिलो पटक हावा र पानीबाट मात्रै तरकारी फलाउने प्रविधि शुरु भएको छ ।
मोदी गाउँपालिका–५ अम्बोटमा पाँच वर्षदेखि सफल रूपमा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आउनुभएका लालबहादुर हरिजनले यस्तो प्रविधिबाट तरकारीखेती थाल्नुभएको छ ।
फलामे दुई खम्बाको सहारामा तीन मि लम्बाइ र तीन इन्च मोटाइका प्लास्टिक पाइपमा पानी भरेर प्लास्टिक ड्रम र सोलार प्लानको सहयोगमा सो खेती गर्न सकिने हरिजनले बताउनुभयो । भर्खरै शुरु गर्न लागिएको सो प्रविधिबाट छिटो उत्पादन दिने साग, धनियाँ, मुला तथा लहरे तरकारी उत्पादन गर्न मिल्ने बताइएको छ ।